Trump oo loogu baaqay in uu soo wareejiyo cajalado | TOP NEWS
By Tifaftiraha Somalida Maanta on May 15, 2017 No Comment
Masuuliyiin sarsare oo ka tirsan baarlamaanka dalka Maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ugu baaqay in uu soo wareejiyo dhammaan cajaladaha laga duubay wada hadaladii dhexmaray isaga iyo hogaamiyihii hay’adda FBI-da James Comey ee uu shaqada ka tiray.
Lindsey Graham oo isna ka tirsan Senate-ka kana mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegat in loo baahan yahay in “Aqalka Cad” ee Maraykanka looga arrimiyo uu caddeeyo in cajaladaha la sheegayo ay jiraan.
Trump ayaa Comey uga digay todobaadkii hore in uu la hadlo warbaahinta, wuxuuna sheegay in “in ay u fiicnaan lahayd in uu rajeeyo in aan cajalado laga haynin” wadahadalladii dhexmaray.
FBI ayaa baaraysa macquulnimada eedaymaha sheegaya in calaaqaad uu dhexmaray Ruushka iyo ol’olihii doorashada ee Trump.
Trump oo loogu baaqay in uu soo wareejiyo cajalado added by Tifaftiraha Somalida Maanta on May 15, 2017